Testosterone ဟော်မုန်းနှိုင်းယှဉ်မှုနဲ့ Testosterone ဒဏ္Myာရီ - မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်မှာ
comments: ကျနော်တို့ရေးသားခဲ့သည် ဤဆောင်းပါးတွင် rebooting ၏အကျိုးကျေးဇူးများနောက်ကွယ်ရှိဖြစ်နိုင်ချေရှိသောယန္တရားများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်။ testosterone ဟော်မုန်း၊ abstinence နှင့်သုက်လွှတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးအများဆုံးအယူအဆများကိုကျွန်ုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်ရာသုတေသနပြုမှု၏ကြွယ်ဝမှုကသွေးကြော Testosterone level အပေါ်သိသာထင်ရှားသောရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုမရှိခြင်းသည် ၇ ရက်ပတ်လုံးရက်ဆက်နေခြင်းကိုရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်လေ့လာမှုမရှိသေးပါ။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု (ဥပမာ hypothalamus) နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟော်မုန်းများပြောင်းလဲသွားသည်ဟုမယူဆနိုင်ပါ။ သုတ်ရည်လွှတ်မှု၏ဆိုးကျိုးများကိုဆိုးရွားသည့်စွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများနှင့်မရောထွေးရန်စာဖတ်သူများ (အထူးသဖြင့် r / nofap) အားကျွန်ုပ်သတိပေးပါသည်။
၁) ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ၏ကြွယ်ဝမှုကရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သုညသန္ဓေတားခြင်းတို့သည်သွေး၏ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေအထောက်အထားများရှိသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ satiation တစ် ဦး အပါအဝင် - မျိုးစုံ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသည် အန်ဒရိုဂျင် receptors အတွက်ကျဆင်း။ နှင့်တိုးပွါး အီစထိုဂျင် receptors နှင့် dopamine-blocking opioids အတော်ကြာဦးနှောက်ဒေသများတွင်။ အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူကြာ အကြောင်းကို 15 ရက်ပေါင်း နှင့်အတော်လေးခြားပြီးစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကနေဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော.
2) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ် abstinence နှင့် plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားမျှတသမတ်တည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ် - တစ်ဦးထက်အခြား တစ်ရက်ယာယီဆူး (၇) ရက်ဆက်ပြီး abstinstations ပြီးနောက် (၄၆% ရာခိုင်နှုန်း) ။ ကျယ်ပြန် အထီး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတက်အကျ (10-40%) သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
3) teststones ဟော်မုန်းပမာဏမြင့်တက်နေခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ လေ့လာမှုနှစ်ခုကသာရေရှည် abstinstin (၁၆ ရက်နှင့် ၂၁ ရက်) အတွင်း T အဆင့်ကိုတိုင်းတာပြီး၊
နာမည်ကျော်ကြားသူ တရုတ်လေ့လာမှု တိုင်းတာ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် 16 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့တိုင်းနှင့်ဆူးဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည့်အခါပတ်ပတ်လည်နေ့က 7, သည်အထိအနည်းငယ်သာပြောင်းလဲမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တနေ့ကဆူးပြီးနောက် testosterone နေ့က 8 ကနေစမ်းသပ်မှုအဆုံးသတ်သည့်အခါတစ်နေ့တာ 16 မှတဆင့် baseline သို့မဟုတ်အနည်းငယ်နိမ့်ဖို့ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။
4) ဤ ြဒပ်မဲ့သော - တစ်ဦး 3-ရက်သတ္တပတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence အောက်ပါကျန်းမာယောက်ျားအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင်အော်ဂဇင်မှ endocrine တုံ့ပြန်မှုလေ့လာမှုများကို ၃ ပတ်ကြာသုက်ပိုးမွှားခြင်းမပြုလုပ်သောကြောင့်ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းတိုးစေကြောင်းသက်သေပြသည်။ မထားဘူး စိတ္တဇမှဤဝါကျသည်အသုံးအနှုန်းညံ့ဖျင်းပြီးလှည့်ဖြားသည် -ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းအော်ဂဇင်အားဖြင့် unaltered ခဲ့ပေမယ့်, ပိုမိုမြင့်မား testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှု abstinence ၏ကာလအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်“ ထဲမှာ အပြည့်အဝလေ့လာမှု, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်အတူတူပါပဲ။ အဆိုပါ testosterone ဟော်မုန်းဂရပ်စစ်ကြော C on 379 စာမျက်နှာ။ ရုပ်ရှင် (10 မိနစ်အမှတ်အသား) ၏စတင်မှာ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုသတိထားမိနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်တူညီခဲ့ကြသည်။ ဇာတ်လမ်း၏အဆုံး။ masturbating နေစဉ်စိတ္တဇအတွက်ရှုပ်ထွေးဘာသာစကား testosterone ဟော်မုန်းကွဲပြားမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြည့်နေစဉ် T-အဆင့်ဆင့် ကျဆင်းသွား pre- abstinence တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ session တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၁ ရက် abstinstence ပြီးနောက်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အချိန်တွင် T-level သည် ၁၀ မိနစ်အခြေခံနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။ အဆိုပါကြေညာချက် -ပိုမိုမြင့်မားသော testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှု abstinence ၏ကာလအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်"- ဆိုလိုသည်မှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် porn ကြည့်ရှုခြင်းတို့တွင် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည်မကျဆင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သုတေသီများက porno ကြည့်ခြင်းကိုစောင့်မျှော်ခြင်း (နောက်ဆုံးတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တိုးပွားလာခြင်း) သည် testosterone ဟော်မုန်းကိုကြည့်ရှုစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမြင့်တက်စေခဲ့သည်။
5) ကြွက်လေ့လာမှုများ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု" သို့သုတ်ရည်လွှတ်မှုသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းတသမတ်တည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဤလေ့လာမှုများသည် ၁၅ ရက်အထိတိရိစ္ဆာန်များကိုလေ့လာသည်။ သို့သော်သူတို့ကအန်ဒရိုဂျင် receptors လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် (dopamine ပိတ်ဆို့ထားသည့် estrogen receptors & opioids) တိုးပွားလာခြင်းနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်ပြောင်းလဲခြင်းများအပါအ ၀ င် limbic system အတွင်းအပြောင်းအလဲများစွာကိုရှာတွေ့သည်။
6) Long-term မျောက်ဝံများအပေါ်လေ့လာမှုများ သုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အသွေး testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားအဘယ်သူမျှမယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည်။
7) အတော်များများလေ့လာမှုများနှင့်အတူကျန်းမာယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားအလားတူ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ ရှည်ကြာသော ED (1, 2, 3, 4) ။ တစ်ဦးတည်းသောဤလေ့လာမှုများ မှစ. ငါတို့သည်သုတ်ရည်လွှတ်၏ကြိမ်နှုန်း T ကအဆင့်ဆင့်မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်) 1) အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းခဲ ED,2တစ်အကြောင်းမရှိကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ 8), အဲဒီနှစျခု ED လေ့လာမှုများ၏စာရေးဆရာများ (study1, study2) ထိုအကြံပြု abstinence နာတာရှည်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဦးတည်သွားစေခြင်းငှါ။ ဤသည် 2014 ပညာရေးလေ့လာမှု penile implants ခွဲစိတ်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှဦးဆောင်ပြီးနောက်ပိုမိုမြင့်မား testosterone ဟော်မုန်း / DHT တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
9) ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများသောအမျိုးသားများသည်ဆရာဝန်များနှင့်တွေ့သည်။ အားလုံးနီးပါးသည်ပုံမှန် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအစီရင်ခံသည်။
၁၀) လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ testosterone ဟော်မုန်းနိမ့်ခြင်းသည်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောစိုက်ထူမှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ မျိုးဆက်ပွား endocrinology ၏ပါမောက္ခတစ် ဦး မှဤဆွေးနွေးမှုကိုကြည့်ပါ။ Hypogonadal ယောက်ျားနဲ့စိုက်ထူ နှင့် Testosterone နဲ့ Erectile အလုပ်မဖြစ်
11) ဤ တစ်ခုတည်းလေ့လာမှု အချို့သောဘာသာရပ်များအတွက်၊ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှစ၍ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်မှုကိစ္စလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်လေ့လာမှုအရ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားမှုသည်လိင်ဆက်ဆံမှုကာလနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ နည်းနည်းဆန့်ကျင်။ ဤလေ့လာမှုကိုအခြေအနေတွင်ထားပါ။ ၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပုံတူကူး။ မရသောမရေမတွက်နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ထားသော variable များပါ ၀ င်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းနှင့်မြင့်မားသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုကြိမ်နှုန်း၊ asstinence၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်ကိုစစ်ဆေးသောအခြားတိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအားလုံးသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုငြင်းဆိုသည်။
12) စွဲဖြစ်စဉ်များသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် porn-သွေးဆောင် ED ၏အဓိကအကြောင်းရင်းအဖြစ်လိင်စိတ်၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံး, အဘယ် euphemistically "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်ရန်သက်သေအထောက်အထားအချက်များ။
၁၃) ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူအချို့သည် testosterone ဟော်မုန်းကိုအောင်မြင်စွာမစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုအမျိုးသားများပြန်လည်လည်ပတ်သောအခါသူတို့၏ ED သည်ပျောက်ကင်းသွားသည်။
စကားမစပ် 14), က testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အပေါ်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမသက်ရောက်ရှိပါတယ် porn ကြည့်အစီရင်ခံစာပါဝင်ကြောင်းအများဆုံးလေ့လာမှုများ။ ဥပမာ, သာမန်ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏ endocrine ဆိုးကျိုးများ။ (သို့သော်အချို့ပြုပါ)
15) ဆုကြေး circuitry dopamine နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, အကွောငျးရငျးနှင့် ထူထောင်. တိုတိုထဲမှာ, အမြားအပွားတိုးတက်မှု ယောက်ျားတွေအဖြစ်လိင်စိတ်နှင့်ယုံကြည်မှုအတွက်ကြည့်ရှု သူတို့ reboot ဖြစ်နိုင်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအပြောင်းအလဲများကနေလာမယ့်, မ၎င်းတို့၏ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နေကြသည်။
ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းသောနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှကင်းဝေးသည်နှင့်အမျှများစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုကောင်းလာခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနည်းခြင်းနှင့်ပိုမိုလှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သောအပြုသဘောဆောင်သောပြောင်းလဲမှုများကိုယူဆခြင်းသည်သဘာဝကျသည်မှာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ သို့သော်လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်သုတေသနများက testosterone ဟော်မုန်းကိုအယူအဆမထောက်ခံပါ။ အမျိုးသားအချို့သည် T ပိုမိုမြင့်မားသော T နှင့်ဆက်စပ်နေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ကြသော်လည်း (မတိုင်မှီ & စဉ်အတွင်း) စမ်းသပ်ခံရသည့်အမျိုးသားအများစုသည်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ အချက်များ (စိတ်ဖိစီးမှု၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အစားအစာ) သည် T အဆင့်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းရလဒ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများသည် hypothalamus မှတစ်ဆင့်ဟော်မုန်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်မှာအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာများမှာ - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအာရုံကြောစနစ်နှင့် HPA ဝင်ရိုး (CRF, cortisol, norepinephrine) ပြောင်းလဲခြင်း၊ gonad သို့မဟုတ် adrenal glands မှဆင်းသက်လာ steroid hormones များနှင့်အတူ။ porn စွဲသူများနှင့်“ rebooted” porn စွဲသူများအတွက်ကြာရှည်စွာသုတေသနပြုခြင်းသည်နောက်ကွယ်ရှိယန္တရားများကိုရှင်းလင်းစေသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုအခိုင်အမာ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းအသံမြည်ခြင်း, လေ့ကျင့်ခန်းမှပိုကောင်းတုံ့ပြန်မှု, ဆံပင်ကြီးထွားမှု, ရှင်းလင်းအသားအရေ, အဖြစ်
ယောက်ျားများတွေ့ကြုံခံစားခွင့်များ၏နောက်ကွယ်ရှိသိပ္ပံပညာအတွက် - Porn၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် Mojo - အာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် - ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏ Mojo ကိုပြန်လည်ရယူကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်?
ABSTINENCE TO သို့ RELATED Lower T က။ ပိုမိုမြင့်မားသော T-နဲ့လိင်ဆက်ဆံပြန်လည်စတင်:
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) နဲ့လူနာသိသိသာသာလျှော့ချသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း (T) ကိုအဆင့်ဆင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ nonhormonal ကုထုံးအမျိုးမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပွနျလညျထူထောငျတျောမူသောအတွက်ပညာရေး၏ etiology ၏လွတ်လပ်သောခဲ့သောဤ hypotestosteronemia ၏ယန္တရား, သာလူနာအတွက်၎င်း၏ပြောင်းပြန်နားလည်စေရန်, ကျနော်တို့ (ED လူနာများ၏တူညီသောဆောင်များတွင်အတွက်သွေးရည်ကြည် luteinizing ဟော်မုန်း (LH) တိုင်းတာ ဎ = 83; 70% nonorganic, 30% အော်ဂဲနစ်). immunoreactive LH (ကျနော်-LH) နှင့် bioactive LH (B-LH) နှစ်ဦးစလုံးကုထုံးပြီးနောက် entry ကိုနှင့်3လအတွင်းမှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်ကို (တစ်လလျှင်လိင်ဆက်ဆံမှု၏အောင်မြင်သောကြိုးစားမှု၏ဆိုလိုသည်မှာနံပါတ်) အပေါ်အခြေခံပြီး, လူနာအပြည့်အဝနအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည် (အမည်ရအနည်းဆုံးရှစ်ကြိုးစားမှု; ဎ = 51), တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းန (အနည်းဆုံးတဦးတည်းကြိုးပမ်းမှု; ဎ = 20) နှင့် Non-န (ဎ = 16) ။ ED မရှိသောကျန်းမာသောအမျိုးသား ၃၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလူနာ ၈၃ ယောက်တွင်အခြေခံ B-LH (ဆိုလိုသည်မှာ +/- sd) လျော့နည်းသွားသည်။ (၁၃.၆ +/- ၅.၅ နှင့် ၃၁.၇ +/- ၆.၉ IU / L, P <30) သည် အနည်းငယ်တိုးသော်လည်းပုံမှန်အကွာအဝေးတွင် I-LH (83 +/- 13.6 vs 5.5 +/- 31.7 IU / L, P <6.9)၊ အကျိုးဆက်အား B / I LH အချိုး (0.001 +/- 5.3 vs 1.8 +/- 3.4, P <0.9) လျော့နည်းသွားသည်။
သွေးရည်ကြည်ကို T ဘို့ငါတို့အရင်လေ့လာဆင်တူ, သုံးယောက်ရလဒ်ကိုအုပ်စုများအခြေခံမှာဤသုံးပါး parameters များကိုမဆိုဘို့သိသိသာသာကွာခြားခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ရလဒ်အုပ်စုများကုထုံးပြီးနောက်ကွဲပြားပါတယ်။ LH ၏ Bioactivity အပြည့်အဝနအတွက်သိသိသာသာတိုးပွားလာ (pre-therapy=13.7+/-5.3, post-therapy=22.6+/-5.4, P<0.001), ကြိုးနှံစှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနအတွက် (၁၄.၈ +/- ၆.၉ против ၁၇.၂ +/- ၇.၀၊ P <14.8) ဒါပေမယ့် Non-နအတွက်မပြောင်းလဲရှိနေဆဲ (11.2 +/- 2.2 vs 12.2 +/- 5.1) ။ I-LH နှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများ (5.2 +/- 1.7 vs 2.6 +/- 5.4, P <0.001; 5.4 +/- 2.2 vs 4.0 +/- 1.7, P <0.05; 5.6 +/- 1.2) အတွက်ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်ချက်သို့သွားခဲ့သည်။ vs 5.0 +/- 1.2, အသီးသီး) နှင့် B / I အချိုးအတွက် B-LH ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းကြောင်းအတိုင်း (3.7 +/- 4.1 vs 11.8 +/- 7.8, P <0.001; 4.2 +/- 4.3 vs 5.8+ /-4.2, P <0.05; 2.1 အသီးသီး + 0.7 +/- 2.6 အသီးသီး) 1.3 +/- XNUMX ။
ကျနော်တို့ ED လူနာများ၏ hypotestosteronemia LH ၏ချို့ယွင်း bioactivity ကြောင့်ကြောင်းကို hypothesize ။ ဤသည်ကိုလျှော့ချ bioactivity Reversible လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြန်လည်စတင်မသက်ဆိုင်သည့်ကုထုံးနည်းလမ်း၏အောင်မြင်ကြောင်းဖြစ်သည်။ pituitary ဟော်မုန်း biopotency အဆိုပါ hypothalamus ကထိန်းချုပ်ထားသည်ကို ထောက်. , LH hypoactivity လွှဲမရှောင်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းလိုက်နာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်မှဆက်စပ် hypothalamic functional ဖြစ်စေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်သင့်.
comments: Authors အောင်မြင်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု ED ကုသယောက်ျားအတွက် LH နှင့် testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လူတို့သညျအဘယ်သူအားမျှဟော်မုန်းနဲ့ကုသနှင့်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းဟာသူတို့ရဲ့ပညာရေး၏အကြောင်းရင်းမဟုတ်ခဲ့ခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျတှငျစစျမှနျသောလျှင်ဤလိင် / သုတ်ရည်လွှတ် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းမှုတားဆီးစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအတွက်နောက်ပြန်လှည်လျှော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
int J ကို Androl ။ 1999 Dec;22(6):385-92.
Jannini EA ၏, Screponi E ကို, Carosa E ကို, Pepe M က, lo Giudice က F, Trimarchi က F, Benvenga S က.
စိုက်ထူ၏ယန္တရားထဲမှာနှင့်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ pathogenesis လူ့လိင်အတွက်အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍ, ဆွေးနွေးငြင်းခုံအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်း၏အသုံးပြုမှုကိုအထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏လက်တွေ့ကုထုံးအတွက်ဘုံဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, hypogonadism ခွန်အားမရှိခြင်း၏ရှားပါးအကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အော်ဂဲနစ်သို့မဟုတ် Non-အော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများကနေ Non-ဟော်မုန်းခွန်အားမရှိခြင်းကုထုံးမီနှင့်အပြီးဖြစ်စေရရှိလာတဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကဲဖြတ်။ ခွန်အားမရှိခြင်း၏ရှစ်ဆယ်-သုံးခုဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားမှု (70% အော်ဂဲနစ်, 30% Non-အော်ဂဲနစ်, သွေးကြော aetiology အများဆုံးမကြာခဏဖြစ်ခြင်း) အမျိုးမျိုးသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ (တစ်ပြိုင်တည်းပဲ E1, yohimbine) သို့မဟုတ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး (သွေးကြောခွဲစိတ်မီနှင့်အပြီးဟော်မုန်းစိစစ်ချထား penile prostheses, လေဟာနယ် devices များ) ။
Thirty အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, အော်ဂဲနစ်နှင့် Non-အော်ဂဲနစ်နှစ်ဦးစလုံးအကြောင်းတရားများကနေရရှိလာတဲ့ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့်အတူလူနာစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးလုံး၏လျော့ချသွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်ပြသ (11.1 +/- 2.4 vs. 17.7 +/- 5.5 nmol / L) နှင့်အခမဲ့ testosterone ဟော်မုန်း (56.2 +/- 22.9 vs. 79.4 +/- 27.0 pmol / L) (နှစ် ဦး စလုံး p <0.001) ။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလမတူညီသော aetiologies နှင့်အမျိုးမျိုးသောခွန်အားမရှိခြင်းကုထုံးတစ်ခုသွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်းသိသိသာသာတိုးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ (15.6 +/- 4.2 nmol / L ကိုများနှင့်အသီးသီး 73.8 +/- 22.5 pmol / L ကို) ကုထုံး့ပြီးနောက်3လအတွင်းပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်သူကိုလူနာကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည် (p <0.001) ။
ဆန့်ကျင်တွင်, သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်ကုထုံးထိရောက်မှုရှိကြ၏ဘယ်သူကိုအတွက်လူနာအတွက်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။ pre-ကုထုံးအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုခွန်အားမရှိခြင်း၏ aetiology ၏လွတ်လပ်သောခဲ့ကြသည်ကတည်းကကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးပြီးနောက် coital လှုပ်ရှားမှု၏ပြန်လည်စတင်ရန်နှင့်အတူ၎င်း၏ပုံမှန်အားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ်ဤဟော်မုန်းပုံစံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ဆုံးရှုံးမှုဆက်စပ်ကြောင်း hypothesize ။ အဆိုပါစောဒနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးတလျှောက်လုံးကိုယ်နှိုက်ကအစာကျွေးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
comments: Authors လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းအောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းမှဦးဆောင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထက်ပါလေ့လာမှုမှာသူတို့ကဒီ ED ၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ hypothesize, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ပြန်လည်စတင်သူ့ဟာသူကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပညာရေးအနေဖြင့်ခံစားခဲ့ရအပေါငျးတို့သဘာသာရပ်များအဖြစ်ထွက် sort ရန်ခက်ခဲများနှင့်အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။
Arch စာလုံးစောင်း Urol Androl ။ 2014 စက်တင်ဘာ 30; 86 (3): 193-6 ။ Doi: 10.4081 / aiua.2014.3.193 ။
Canguven O1, Talib RA, Shamsodini တစ်ဦးက, အယ်လ်အန်ဆာရီတစ်ဦးက.
penile Prosthesis implantation erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည်သောလူနာတွေအတွက်နောက်ဆုံးကုသမှု option တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူနာအများစုမှာ penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုအဘို့ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့မကြာခဏသူတို့ရဲ့ penile Prosthesis ကိုအသုံးပြုပါ။ ယခင်စာပေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းလျော့နည်းသွားသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်အပြန်အလှန်မှုပြသခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ penile Prosthesis အသုံးပြုမှုပြီးနောက်သွေးရည်ကြည်လိင်ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ 2.7 1.5 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း± penile Prosthesis ခွဲစိတ်ခဲ့သူတို့၏လိင်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲအတှကျ sixtyseven လူနာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
လူနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဘို့မိမိတို့ penile Prosthesis သုံးပြီးခဲ့ကြသည် တစ်လလျှင် 9.9 ± 5.7 အကြိမ်ယုတ်။ dehydroepiandrosterone sulfate (5.3 ± 2.6 vs 4.5 ± 2.9; p = 0.031) Pre-ခွဲစိတ်ရလဒ်များကိုနှိုင်းယှဉ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ penile Prosthesis အသုံးပြုမှုမီနှင့်အပြီးလူနာသွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုဆိုလိုအသီးသီး 15.78 nmol / L ကိုနှင့် 4.8 ± 16.5 nmol / L ကို±ဆေးခန်းသိသိသာသာ 6.1 ခဲ့ကြသည်။ penile Prosthesis အသုံးပြုမှုမီနှင့်အပြီးလူနာသွေးရည်ကြည် luteinizing ဟော်မုန်းပမာဏဆိုလိုအသီးသီး 3.98 ± 2.16 IU သည် / L ကိုနှင့် 5.47 ± 4.76 IU သည် / L ကိုဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကွာခြားချက်အကျူးနဲ့ post-ခွဲစိတ်အကြားယုတ်စုစုပေါင်းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် testosterone ဟော်မုန်း, estradiol နှင့် luteinizing ဟော်မုန်းပမာဏအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကရလဒ်တွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကြောင့်အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ penile Prosthesis ကိုထညျ့သှငျးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလူတို့တွင်အပြုသဘောလိင်ဟော်မုန်းပမာဏပြောင်းလဲသွားကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။
comments: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးပွါးသို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ချိန်တွင်ပိုမိုမြင့်မား Testosterone နဲ့ DHT သတင်းပို့နောက်ထပ်လေ့လာမှု။
ABSTINENCE AND DIFFEREING သုက်လွှတ်မှုအကြိမ်ရေများ၏ရေရှည်တွင်ဆိုးကျိုးများ:
အမျိုးသားများတွင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်တစ်ဦးကသုတေသနပြု။
Jiang M က, Xin J ကို, Zou မေး, Shen JW ။ J ကို Zhejiang Univ သိပ္ပံ။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအမျိုးသားများတွင်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုကြားဆက်ဆံရေး၏နားလည်မှုရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 28 စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းပါဝင်မှုနှစ်ခုအဆင့်အဘို့အသုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက် abstinence ကာလအတွင်းမှာနေ့စဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
စာရေးသူများမှ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏသည် ၂ ရက်မှ ၅ ရက်ထိပုံမှန်နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၇ ရက်မြောက်နေ့တွင်မူသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်လာမှုသည်အခြေခံ၏ ၁၄၅.၇% (P <2) သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်အစဉ်အမြဲရပ်တည်နေစဉ်တွင်ပုံမှန်ပုံမှန်အတက်အကျမတည်ရှိပါ။
သုတ်ရည်လွှတ်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပေါ်မဟုတ်ဘူးသောအထူးသည် Periodic သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုမူကွဲ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်နှင့်အချုပ်အခြာဖြစ်၏။ ရလဒ်သုတ်ရည်လွှတ်-စေသောမူကွဲ abstinence ၏ 7th နေ့၌အထွတ်အထိပ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ပြသ; နှင့်တစ်ခုသုတ်ရည်လွှတ်၏ထိရောက်သောအချိန်7ရက်ပေါင်းနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်သည် Periodic ပြောင်းလဲမှု၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းမှတ်တမ်းတင်ရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်၏ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်သည် Periodic ဟာသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအပြောင်းအလဲနှင့်သည် Periodic ပြောင်းလဲမှု၏ပုံစံနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများအကြားဆက်စပ်မှု။
comments: ဤသည်တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုကိုနေ့စဉ်သုံးပတ်ကြာတိုင်းတာသည့်အတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာနိုင်သည့်အပြင်တစ်ရက်မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီး၌မည်သည့်ခြားနားချက်မျှမတွေ့ရပါ။ ဤသည်တနေ့အထွတ်အထိပ်အော်ဂဇင်အားဖြင့်အစပျိုးနေတဲ့သံသရာဖော်ပြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါ 16 နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့တိုင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုင်းတာ။ testosterone အဆင့်ဆင့်တဖြည်းဖြည်းအခြေခံ၏ 7% ရောက်ရှိဖို့ 146 ရက်ပေါင်းကျော်မထကြဘူး။ မဟုတ်သလိုအဆင့်အတန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းပါဘူး။ ဒါဟာတနေ့ဆူးင်-up နှင့်နောက်ကျော။ အခြားနေ့စဉ်တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရာတွင် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏပုံမှန်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိနေသည်။ Plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကို hypothalamus မှဟော်မုန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ အခြားဟော်မုန်းများ (သို့) ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကိုဟော်မုန်းများဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သောဤပလာစမာ - testosterone ဟော်မုန်းသံသရာ၏အရေးပါမှုကိုဘယ်သူမှမသိသေးပါ။
မှတ်စု: ဒီယောက်ျားကာယဗလ, လေ့ကျင့်ခန်း, လိင်, ကျန်းမာရေးနှင့်တူသောဆွေးနွေးရန်ဘယ်မှာဖိုရမ်များအပေါ်အများဆုံးကိုးကားလေ့လာမှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စိတျထဲမှာစသည်တို့ကိုလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ, လူမှုရေးအခြေအနေ, ခံစားချက်, pheromones, စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ခံစားမှု, ရာသီအပါအဝင်နေ့စဉ် testosterone ဟော်မုန်းအတက်အကျကိုအကျိုးသက်ရောက်သောမြောက်မြားစွာအချက်များ, စောင့်ရှောက်ပေးပါ
သာမန်လူ့ယောက်ျားအတွက် orgasm ကြိမ်နှုန်းနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်
မတ်လ 1976, Volume ကို 5, ပြဿနာ 2, စစ 125-132
နှစ်ဆယ်အထီး2နံနက် plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့် orgasm အကြိမ်ရေအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်တဲ့ 8 လလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့။ ဘာသာရပ်များအတွင်းမှာပဲ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားအဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ဘာသာရပ်များကျော်သို့သော်ဆက်ဆံရေး၏ညှနျကွားပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလိင်လျော့နည်းတက်ကြွစွာတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အမြင့်မားခဲ့ကြသည်ဆိုလို။
COMMENT: ပျမ်းမျှ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလျော့နည်းလိင်တက်ကြွအမျိုးသားများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ သို့သော်-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးချင်းစီ-on ကိုပျှမ်းမျှအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဤ တစ်ခုတည်းလေ့လာမှု အချို့သောဘာသာရပ်များအတွက်၊ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှစ၍ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်တက်မှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုလျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်လေ့လာမှုအရ testosterone ဟော်မုန်းမြင့်မားမှုသည်လိင်ဆက်ဆံမှုကာလနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ နည်းနည်းဆန့်ကျင်။ ဤလေ့လာမှုကိုအခြေအနေတွင်ထားပါ။ ၎င်းသည်ပုံတူကူးယူထားခြင်းမရှိသော၊ မရေတွက်နိုင်သောမရေမတွက်နိုင်သော variable များပါဝင်သည်။ testosterone ဟော်မုန်းကိုလေ့လာသည့်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူသားလေ့လာမှုအားလုံးနှင့် ၁) သုတ်ရည်လွှတ်မှုကြိမ်နှုန်းမြင့်ခြင်း၊ ၂) ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ ၃) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်အမျိုးမျိုး၊ ၄) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှု၊
တစ်ဦး 3-ရက်သတ္တပတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence အောက်ပါကျန်းမာယောက်ျားအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင်အော်ဂဇင်မှ endocrine တုံ့ပြန်မှု။
ကမ္ဘာ့ဖလား J ကို Urol ။ 2001 နိုဝင်ဘာ; 19 (5): 377-82
COMMENT: အများ၏အသုံးအနှုန်း ြဒပ်မဲ့သော တစ်ဦးရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အပြည့်အဝလေ့လာမှု လုံးဝငါ bolded အရာကိုဆန့်ကျင်။ #4 အထက်ကြည့်ရှုပါ
testosterone ON သုက်၏ရေတိုရေရှည်အကျိုး
လူကိုလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်ဖို့ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုပုံစံနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာများကိုကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာဆယ်ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းစဉ်ဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသွေးကြောနှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်မှ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ အသွေးအားစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင်အော်ဂဇင်စဉ်နှင့်အပြီးရှေ့တော်၌, ရေးဆွဲခြင်းနှင့် adrenaline, noradrenaline, cortisol, ဟော်မုန်း (LH) luteinizing, follicles လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), prolactin, ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) ၏သွေးရည်ကြည်ပြင်းအားအဘို့အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, beta-နဲ့အတူ Endorphins ခဲ့ testosterone ဟော်မုန်း။ orgasm နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအားနဲ့ noradrenaline ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အတွက်ယာယီတိုးသွေးဆောင်။ Prolactin ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်မွငျ့မား 30 မိကျန်ရစ်၏။ ဆနျ့ကငျြ, အခြား endocrine variable တွေကိုအဘယ်သူအားမျှသိသိသာသာလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သညျ။
comments: က Short-term testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအော်ဂဇင်-ရသောအောက်ပါလေ့လာမှုဆန့်ကျင်ခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ဘူး။
အမျိုးသားများတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ endocrine ဆိုးကျိုးများ
ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ်, Vol 70, Issue 3, လူ့အဖွဲ့အစည်းများက 439-444 1976 ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်များအတွက်
pregnenolone, dehydroepiandrosterone (DHA), androstenedione, testosterone ဟော်မုန်း, dihydrotestosterone (DHT), oestrone, oestradiol, cortisol နှင့် luteinizing ဟော်မုန်း (LH) ၏အဆင့်ဆင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမီနှင့်အပြီးနုပျို, ပုံကျန်းမာယောက်ျား၏အုပ်စုတစု၏ရံပလာစမာထဲမှာတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အလားတူ steroids လည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်လင့်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သောအတွက်တစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်လေ့လာမှုမှာဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်ထွက်သယ်ဆောင်မခံခဲ့ရပါဘူး။ Steroid တစ်မျိုးအဆင့်ဆင့်ထိန်းချုပ်မှုလေ့လာမှုမှာမပြောင်းလဲကျန်ရစ်သော်လည်းအားလုံး steroids ၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာ, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြီးနောက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြီးနောက်ဆုံးမှတ်သားအပြောင်းအလဲများကို pregnenolone နှင့် DHA အဆင့်ဆင့်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမပွောငျးလဲ LH ၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ မီနှင့်အပြီးနှစ်ဦးစလုံး testosterone ဟော်မုန်း၏တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပလာစမာအဆင့်ဆင့်သိသိသာသာမဟုတ်အခြား steroids လေ့လာခဲ့၏သူတို့အား, DHT နှင့် oestradiol ၏သူတို့အားဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, cortisol ပမာဏသိသိသာသာ pregnenolone, DHA, androstenedione နှင့် oestrone ၏သူတို့အားဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ တူညီသောဘာသာရပ်များအတွက်, pregnenolone ၏အဆင့်ဆင့်, DHA, androstenedione, Testosterone နဲ့ DHT, androstenedione နှင့် oestrone ။ တူညီသောဘာသာရပ်များအတွက်, pregnenolone, DHA, androstenedione ၏အဆင့်ဆင့်, ဟောပြောမှုတွေပလာစမာထဲမှာ Testosterone နဲ့ DHT လည်းခန့်မှန်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်သိသိသာသာမီနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ယူသည့်စနစ်အသွေး၌သက်ဆိုင်ရာ Steroid တစ်မျိုး၏အဆင့်ဆင့်မှဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ လက်တွေ့ကျတဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်, ရလဒ်နှစ်ခုလုံးကိုသွေးနှင့်သုတ်ရည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်အခါတိုင်း, သွေးနမူနာသုတ်ရည်စုဆောင်းမှုအရင်အဦးနေရာရမည်ဟုဖော်ပြသည်။
comments: က Short-term testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုအော်ဂဇင်အားဖြင့်ခြီးမွှောကျပေမယ့်ဒီထက်ဒါသည်အခြား steroids ထက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤရလဒ်အများအပြားသည်အခြားလေ့လာမှုများအားဖြင့်တုဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာသန်စွမ်းသက်ကြီးရွယ်အိုများလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။
J ကို Gerontol ။ 1982 May;37(3):288-93.
Tsitouras PD, မာတင်အဒေီ, Harman သည် SM.
အသက်ကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးလုံးအတွက်မဟုတ်ဘဲနှစ်ခု variable တွေကိုအကြားမည်သည့်ရှင်းလင်းသောအသင်းအဖွဲ့များ၏လျှောက်လျော့နည်း၏အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။ အိုပေါ် Baltimore longitudinal လေ့လာမှုအတွက်ကျန်းမာသင်တန်းသားများအတွက်, သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူကျဆင်းဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအလွန်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖက်ရှင်အတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ အဟောင်းကို 60 နှစ်အတွင်းယောက်ျားအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်မြင့်နှင့်အတူသူတို့အား (အသက်များအတွက်) သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း၏သိသိသာသာ သာ. ကြီးအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့။ ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အဆီ Testosterone နဲ့ရာခိုင်နှုန်းအကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း, ခန္ဓာကိုယ်အဆီနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ရာခိုင်နှုန်းအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်း testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအကြားအဘယ်သူမျှမဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။4အောင်စထက်ပိုမသောက်ဘာသာရပ်များ။ တစ်နေ့လျှင်အီသနော၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားပေမယ့် testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုလျော့ကြပြီမဟုတ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ data တွေကိုသွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်နှင့်အီသနောစားသုံးမှုပေမယ့်တချို့ဘွဲ့မှအသက်ကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, အကြံပြု, အသက်ကိုယ်နှိုက်ကဆဲသြဇာအရှိဆုံး variable ကိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။
comments: အဟောင်းကို 60 နှစ်အတွင်းယောက်ျား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဆင့်မြင့်နှင့်အတူသူတို့အား (အသက်များအတွက်) သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်း၏သိသိသာသာ သာ. ကြီးအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့။ ဤသည်သုတ်ရည်လွှတ်မှု testosterone ဟော်မုန်းကိုတက်အသုံးပြုသော meme ကိုမထောက်ခံပါဘူး
ပညာရေးမရှိဘဲနဲ့လူတို့အားနှိုင်းယှဉ် ED ရှိသည်ဟု T က Level ဖြင့်လူ
Schwartz MF, Kolodny RC, မာစတာ WH ။ Arch လိင်ပြုမူနေ။ 1980 အောက်တိုဘာ;9(5): 355-66
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုရှိသည့်အမျိုးသား ၃၄၁ ယောက်ရှိအုပ်စုတစ်စုတွင်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု ၁၉၉ ရှိအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသည် Masters & Johnson Institute ၌ ၂ ပတ်ကြာမြင့်စွာလိင်ဆက်ဆံမှုပြုသည့်ကုသမှုအစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူများဖြစ်သည်။ Testosterone ဟော်မုန်းကိုကော်ဒီယိုသတ္တိကြွပြီးနောက်ရေဒီယိုသတ္တိကြွရောဂါစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ သွေးနမူနာများအားလုံးကိုည ၈း၀၀ မှ ၉း၀၀ နာရီအကြားညဥ့်အစာရှောင်ပြီးနောက်ကုထုံး၏ဒုတိယနေ့တွင်ရရှိခဲ့သည်။ ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်း၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့အဆင့်ဆင့် (635 ng / dl ဆိုလို) လိင်ကအလုပ်မဖြစ်အမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းတန်ဖိုးများကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောမ (629 ng / dl ဆိုလို) သို့သော်မူလခွန်အားမရှိသောအမျိုးသားများ (N = 13) သည် testosterone ဟော်မုန်းနည်းနေပြီးအလယ်အလတ်အားနည်းခြင်း (N = 180) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပျမ်းမျှ ၇၁၀ နှင့် ၅၇၄ ng / dl (p <710) အသီးသီးရှိသည်။ သုက်ပိုးမပြည့်မှီသောအမျိုးသားများအတွက် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမှာ ၆၆၀ ng / dl (N = 574) ဖြစ်ပြီးအချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုရှိသောအမျိုးသားများအတွက်မူ ၆၂၂ ng / dl (N = 0.001) ဖြစ်သည်။ ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပြင်းအားများသည်ကုထုံးရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသော်လည်းလူနာများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အဆိုးဆက်စပ်မှုရှိသည်။
comments: ကသင်ျခြိုနှင့်ပုံမှန်ယောက်ျားတွေအကြား testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အတွက်အများကြီးခြားနားချက်-မဟုတ်ပြောပါတယ်အမျှ။ နိဂုံးသင်ျခြိုယောက်ျား orgasm ရှိခြင်းမရှိပါကြောင်းအများကြီးဖြစ်သင့်သည်။ နောက်ထပ်နိဂုံးချုပ်သုက်နှင့် Non-သုက်အကြားရေရှည်ကွဲပြားမှုဖြစ်ပေါ်ပါဘူးကတည်းကရက်နာ-testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် Post-ejaculatory အတွေ့အကြုံကို-အပါအဝင် post-ejaculatory အတွက်သိသာထင်ရှားသောကစားသမားမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လိင်ဟော်မုန်းနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားဆက်ဆံရေးရှိပါသလား? မက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုကနေရလာဒ်။
J ကို Urol ။ 2006 ဒီဇင်ဘာ; 176 (6 Pt 1): 2584-8 ။
ယောက်ျားအသက်အရွယ်အဖြစ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုး၏ပျံ့နှံ့။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း, အသက်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများအထီး endocrine လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ကျနော်တို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်း, bioavailable testosterone ဟော်မုန်း, လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin နဲ့ luteinizing ဟော်မုန်းအကြားအသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
ဒေတာကိုမန်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု, 1,709 ယောက်ျား၏လူဦးရေကိုအခြေခံပြီးဆောင်များတွင်လေ့လာမှုမှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ self-အစီရင်ခံ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်အဘယ်သူအားမျှသို့မဟုတ်ပျော့ vs ပြင်းထန်အဖြစ် dichotomized ခဲ့သည်။ & Odds အချိုးနှင့် 95% CI လိင်ဟော်မုန်းပမာဏနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အကွိမျမြားစှာ Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များအသက်, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း, မိတ်ဖက်ရရှိနိုင်မှု, phosphodiesterase type ကို5inhibitor အသုံးပြုမှု, စိတ်ကျရောဂါ, ဆီးချိုရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါအပါအဝင်အလားအလာရှက်ကြောက်ဘို့ကိုထိန်းညှိဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
လတ်တလောနောက်ကလိုက်ကနေဒေတာတွေကိုအသုံးပြုခြင်း, ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပြည့်စုံဒေတာနှင့်အတူ 625 ယောက်ျားအပေါ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအန္တရာယ်အတွက်တစ်ဦးကအလယ်အလတ်ကျဆင်းခြင်းစုစုပေါင်း Testosterone နဲ့ bioavailable testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုအလားအလာရှက်ကြောက်ဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်သိသာမဟုတ်ခဲ့ပေ။ တိုးမြှင့် luteinizing ဟော်မုန်းပမာဏ (8 IU သည် / ဌသို့မဟုတ် သာ. ကြီး) (2.91% CI 95-1.55, ချိန်ညှိ OR 5.48)6IU သည် / ဌထက်လျော့နည်းဟော်မုန်းပမာဏ luteinizing နှိုင်းယှဉ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ luteinizing ဟော်မုန်းများနှင့်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်အကြားတစ်ဦးကသိသိသာသာအပြန်အလှန်တိုးမြှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်6IU သည် / ဌထက် သာ. ကြီးမြတ် luteinizing ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အတူလူတို့တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အန္တရာယ်အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ပြသခဲ့သည်။
Iကျနော်တို့စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်း, bioavailable testosterone ဟော်မုန်း, လိင်ဟော်မုန်း-binding globulin နဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့အသက်ကြီး၏ဎဒီကြီးမားတဲ့လူဦးရေကိုအခြေခံပြီးဆောင်များတွင်။ testosterone အဆင့်ဆင့်မှသာတိုးမြှင့် luteinizing ဟော်မုန်းပမာဏနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အန္တရာယ်အတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ pituitary testicular စနစ်က psychogenic ခွန်အားမရှိသောနှင့်အတူယောက်ျား၌လေ့လာခဲ့သည်။ အသက် (၂၂) မှ (၃၆) နှစ်အတွင်းမူလတန်းစိုက်ထူနိုင်စွမ်းမရှိသောအသက်အရွယ်ရှိလူနာရှစ် ဦး၊ အလယ်တန်းစိုက်ထူသောစွမ်းအားမရှိသောအသက်အရွယ်ရှိသည့်လူရှစ် ဦး နှင့် ၂၃-၄၃ နှစ်အရွယ်မတိုင်မီသုတ်ရည်လွှတ်သည့်အသက် ၁၆ ယောက်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ E22 (= = 36) မရှိသောလူနာများနှင့် E29 (n = 55) လူနာများကို coital လှုပ်ရှားမှုဆီသို့ ဦး တည်။ စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများ - နောက်ဆုံးအုပ်စုကိုနောက်ထပ်နှစ်ပိုင်းခွဲခြားခဲ့သည်။ အသက် ၂၁ မှ ၄၄ နှစ်အတွင်းရှိသာမန်အရွယ်ရောက်အမျိုးသား ၁၆ ယောက်ကိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရောဂါရှာဖွေမှုကိုစိတ်ရောဂါနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်စိတ်နိုးထမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဝေဒနာခံစားရသည့်လူနာများအားလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါ။ လူနာတစ် ဦး ချင်းစီမှ ၃ နာရီကြာကာလအတွင်းသွေးနမူနာဆယ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ Luteinizing hormone (LH)၊ စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အခမဲ့ (ပရိုတင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သော) testosterone ဟော်မုန်းတို့ကိုတိုင်းတာသည်။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူနာများနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
Sephadex LH-20 ကို အသုံးပြု၍ ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ (+/- SD) ကို အသုံးပြု၍ သာမာန်လူကြီး ၂၇ ယောက်၏ ၆၂၀ +/- ၁၆၀ ng / ၁၀၀ ml၊ ၆၅၀ +/- ၂၀၅ ng / 629 ml အတွက် ပုံမှန်အလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောခွန်အားမရှိသောအမျိုးသား ၂၇ ဦး၊ oligospermia ရှိအမျိုးသား ၂၀ အတွက် ၆၄၄ +/- ၁၇၈ ng / 160 ml၊ ၁၆ azoospermic အမျိုးသားများအတွက် ၅၆၃ +/- ၁၂၅ ng / 100 ml ။ ဤအတန်ဖိုးများကိုအဘယ်သူအားမျှသိသိသာသာကွာခြား။ hypogonadism ၏လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားရှိသည့်အမျိုးသား ၂၁ ယောက်အတွက်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း (+/- SD) သည် ၁၇၇ +/- ၁၂၂ ng / ၁၀၀ ml တွင်သိသာထင်ရှားစွာကွဲပြားသည် (P <27) နှင့်ပုံမှန်ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကွဲပြားခြားနားသည် (P <650) ။ (205) H-testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ၏ ၅၀% ကိုချည်နှောင်ရန်လိုအပ်သောပလာစမာအရေအတွက်အပြန်အလှန်အားဖြင့်တိုင်းတာရာတွင်ပုံမှန်၊ ခွန်အားမရှိသောနှင့် oligospermic အမျိုးသားများနှင့်ဆင်တူသည်။ azoospermic အမျိုးသားများအတွက်မူအနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းခြားနားမှုမှာသိသိသာသာမဟုတ်ပါ (P> 100) ။ 27 hypogonadal အထီး 644 အဘို့ testosterone ဟော်မုန်းစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးများသို့မဟုတ် prepubertal ယောက်ျားလေးများ (နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးအဆင့်ဆင့်) တွင်တွေ့ရှိခဲ့သူများနှင့်ဆင်တူစည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့, နှောင့်နှေးအပျိုဖော်ဝင်၏လေးကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အန်ဒရိုဂျင်ကုထုံးခွန်အားမရှိခြင်း၏ကုသမှုထဲမှာများသောအားဖြင့်အသုံးမကျသည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် testosterone ဟော်မုန်းသက်ရောက်မှု: တစ် Meta-analysis သည်၏ရလဒ်များကို။
Clin Endocrinol (Oxf) ။ 2005 Oct;63(4):381-94.
အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းအန်ဒရိုဂျင်ကျဆင်းမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာလျှော့ချသွေးရည်ကြည် T ကအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင် testosterone ဟော်မုန်းကနေ (T) ကိုကုသမှုအကျိုးရှိမည်ဟုရှိမရှိရှင်းလင်းဖို့, ကျနော်တို့အတိတ် 30 နှစ်များတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ prespecified စံခြင်းဖြင့် life.Guided လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောဒိုမိန်းများပေါ်တွင် T ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ပဲနှစ်ခုလွတ်လပ်သောသုံးသပ်ရေးအားဖြင့်အကဲဖြတ် software ကို-ကူညီဒေတာ abstraction နှင့်အရည်အသွေး, 17 ကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled စမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်းခဲ့ကြသည် အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအသီးအသီးဒိုမိန်းငါတို့သည် T မှစံချိန်စံညွှန်းမီအတောအတွင်းခြားနားချက်ဆွေမျိုးတွက်ချက်ခြင်းနှင့် Meta-analysis သည်၏ကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်သုံးပြီး T ကကုသမှုထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခန့်မှန်းချက်၏ရလဒ်များကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော, reproducibility နှင့်တွေ့ရှိချက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု sensitivity ကိုနှင့် Meta-ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြသည်။
ယေဘုယျအား 656 ဘာသာရပ်များအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်: 284 ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (P) မှ T-, 284 မှ randomized နှင့် 88 Cross-ကျော်အတွက်ကုသခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါပျမ်းမျှလေ့လာမှုအရှည်3လ (အကွာအဝေး 1-36 လအတွင်း) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Meta-analysis သည်, 12 nmol / ဌအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေခံမှာပျမ်းမျှ T ကအဆင့်နှင့်အတူယောက်ျားအတွက်, T ကကုသမှုအတန်အသင့်, အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှု, erectile function ကို၏ရမှတ်များနှင့်ယေဘုယျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအရေအတွက် nocturnal စိုက်ထူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေးအချေါနှငျ့လှုံ့ဆျောမှု၏နံပါတ်တိုးတက်ကြောင်းပြသ T ကရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ် eugonadal ယောက်ျားအတွက် erectile function ကိုမသက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း။ သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောလေ့လာမှုလူဦးရေ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအရသိရသည်လေ့လာမှုများအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဖြင့်စူးစမ်းခဲ့သည်။ လေ့လာမှုလူဦးရေရဲ့ယုတ် T ကအဘို့အ 10 nmol / ဌ၏ cut-off တန်ဖိုးကို vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) အတွက်အန္တရာယ်အချက်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်သော်လည်း, comorbidities နှင့်တိုတောင်းအကဲဖြတ်ကာလ သာ. ကြီးမြတ်ကုသမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ, ကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခန့်မှန်းရန်ပျက်ကွက် eugonadal, ယောက်ျားအတွက် hypogonadal, ဒါပေမယ့်မဖျော်ဖြေလေ့လာမှုအတွက်ဆိုးကျိုးများ။ meta-ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် erectile function ကိုအပေါ် T ရဲ့သက်ရောက်မှု, ဒါပေမယ့်မရလိင်စိတ်, ပြောင်းပြန်ယုတ်အခြေခံ T ကအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပြသခဲ့သည်။ ရရှိနိုင်လေ့လာမှုများ၏ Meta-analysis သည် T-ကုသမှုအနိမ့်သို့မဟုတ် Low-ပုံမှန် T ကအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူရွေးချယ်ထားသည့်ဘာသာရပ်များအတွက် vasculogenic ED တိုးတက်အောင်များအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်အံ့သောငှါဖော်ပြသည်။ erectile function ကိုအပေါ်ကို T ကုသမှုတစ်ခုအကျိုးရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားအကျိုးသက်ရောက်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကျဆင်းလေ့, အခြေခံ T ကအဆင့်ဆင့်တိုးပွားလာနှင့်ရေရှည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု data တွေကိုရရှိနိုင်မဟုတ်နှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်ကြောင်းအသိပေးချက်နှင့်အတူစနစ်ဖြစ်ပြီးရပါမည်။ ပစ္စုပ္ပန် Meta-analysis သည်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ထောငျခြောကိုမီးမောင်းထိုးပြ, အကြီးစား, ရေရှည်အဘို့, တရားဝင်လျှော့ T ကအဆင့်ဆင့်နှင့် ED နှင့်အတူလက်ခဏာလူလတ်ပိုင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူ T ကအစားထိုး၏ထိရောက်မှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ randomized ။
testosterone IN အတက်အကျသာမန်
လူ့အထီးအတွက်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း၏တစ်ဦးကသံသရာ။
J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1975 မတ်လ; 40 (3): 492-500
လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွင်းပုံမှန်လူ့ယောက်ျား၏သွေးရည်ကြည်အတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ lability အကဲဖြတ်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အဆင့်ဆင့်အတွက်ကာလအတွက်ရှာဖွေခဲ့သည်။ 20 လကြာတိုင်းစက္ကန့်နေ့က2ကျန်းမာလူပျိုတို့ထံမှရရှိသောသွေးနမူနာနှောင်းပိုင်းတွင်-ကိုယ်ဝန်သွေးရည်ကြည်နှင့်အတူ radioligand ရွှဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အ assayed ခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်းအချိန် span ကျော် plasma testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ flucturations အရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဘို့သိသိသာသာကြ၏ အပြောင်းအလဲ၏အမြှောက်ဖော်ကိန်း 14 ထံမှ 42% (ပျမ်းမျှ 21%) မှမရသေးသည်လည်းရှိသည်။ ဤအအတက်အကျများတွင် Periodic လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသော, အတော်လေးလွတ်လပ်သောနည်းလမ်းများအားဖြင့်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးသရုပ်ခွဲနည်း ၃ ခုအကြားအနီးကပ်သဘောတူညီမှုကိုဘာသာရပ် ၂၀ မှ ၁၂ ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို ၁၂ ယောက်သည်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကို ၈-၃၀ ရက်ကြားကာလနှင့် ၂ ဝမှ ၂၂ ရက်ကြားကာလများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသံသရာအများစုသည်အနည်းဆုံး ၅% အဆင့်ရှိသည်။ ဤသံသရာ၏ပျမ်းမျှပမာဏသည် ၉ မှ ၂၈% အထိရှိသူများ၏ပျမ်းမျှ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ (ပျမ်းမျှ ၁၇%) ရှိသည်။
မှတ်ချက်များ -“ လူအများစုအတွက်ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပမာဏ၏အတက်အကျအပြောင်းအလဲသည်လူအများစုအတွက်ဖြစ်သည် - ၁၄ မှ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်း (ပျမ်းမျှ ၂၁%) ။ ” ၎င်းသာမကအခြားအရာများသည်လေ့ကျင့်ခန်း၊ စိတ်ဓာတ်၊ လူမှုအဆင့်၊ မူးယစ်ဆေး၊
Testosterone နဲ့ porn အမြင်အပေါ်အံ:
1) သာမန်ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုများ၏ endocrine ဆိုးကျိုးများ။
Psychoneuroendocrinology ။ 1990;15(3):207-16.
Carani ကို C, Bancroft J ကို, del Rio, G, Granata AR, Facchinetti က F, Marrama P ကို.
ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားဆွဖို့ endocrine တုံ့ပြန်မှုရှစ်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်နှစျကွိမျအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ တစျခြိနျတှငျသာကြားနေလှုံ့ဆော်မှုပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။ 15 မိအခြေခံပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ကား 30 မိပြသခဲ့ကြသည်။ အခြားအခါသမယအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားအခွအေနေအဘို့နှစ်ခု 10-မိခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြားနေရုပ်ရှင်၏ 10 မိနှင့်အတူလက်ဆွဲခဲ့ကြသည်။ တဆယ်မိနစ်သွေးနမူနာတစ်ခုစီကိုစမ်းသပ်ရဲ့ start ကနေခေါ်ဆောင်သွားနှင့်ရုပ်ရှင်ပြီးနောက်5နာရီများအတွက်ဆက်လက်ခဲ့ကြသည်။ plasma အဘို့အ assayed ခဲ့သည် testosterone ဟော်မုန်း, LH, prolactin, cortisol, ACTH နဲ့ beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins ။ ဆီးအဆိုပါရုပ်ရှင်ပြီးနောက်မတိုင်မီ4နာရီများအတွက်စုဆောင်း4နာရီခဲ့သည်; ဒီ adrenaline, noradrenaline နှင့် dopamine များအတွက် assayed ခဲ့သည်။ erectile နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုများကပြထားတဲ့အတိုင်းလိင်စိတ်နိုးထ, ရှိသမျှဘာသာရပ်များအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရှိခဲ့ပါတယ် အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအပြောင်းအလဲများ ဟော်မုန်းသို့မဟုတ် catecholamines အဆင့်ဆင့်အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြားနေပေမယ့်မရစဉ်အတွင်း cortisol တစ်ဦးမြင့်တက် မှလွဲ. , ထိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းသို့မဟုတ်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေအောက်ပါ။ ဤရလဒ်သည်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာသိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုပူးတွဲ endocrine သို့မဟုတ်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများမရှိဘဲပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ.
2) Neuroendocrine နှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်မှနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။
Psychoneuroendocrinology ။ 1998 May;23(4):401-11.
Krüger T က, Exton က MS, Pawlak ကို C, ဗွန်ဇုရMühlenတစ်ဦးက, Hartmann ဦး, Schedlowski M က.
လူကိုလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်ဖို့ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုပုံစံနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာများကိုကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာဆယ်ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းစဉ်ဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသွေးကြောနှင့်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်မှ neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့သည်။ အသွေးအားစဉ်ဆက်မပြတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင်အော်ဂဇင်စဉ်နှင့်အပြီးရှေ့တော်၌, ရေးဆွဲခြင်းနှင့် adrenaline, noradrenaline, cortisol, ဟော်မုန်း (LH) luteinizing, follicles လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း (FSH), prolactin, ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) ၏သွေးရည်ကြည်ပြင်းအားအဘို့အခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, beta-နဲ့အတူ Endorphins ခဲ့ testosterone ဟော်မုန်း။ orgasm နှလုံးခုန်နှုန်း, သွေးဖိအားနဲ့ noradrenaline ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အတွက်ယာယီတိုးသွေးဆောင်။ Prolactin ပလာစမာအဆင့်ဆင့်အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်မွငျ့မား 30 မိကျန်ရစ်၏။ မတူတာကတော့, အဘယ်သူမျှမ အခြား endocrine variable တွေကို၏သိသိသာသာလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သညျ။
မှတ်ချက်များ - သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးအချို့တွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းကို ၁၀၀% တိုးစေသည်ဟုဆိုသည်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းသည်သင်၏ porn T အသုံးပြုမှုသည်သင်၏ T level ကိုမြင့်မားစေသည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကိုအတည်ပြုရန်လေ့လာမှုကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ လေ့လာမှုတော်တော်များများအရညစ်ညမ်းမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုမထိခိုက်စေပါ။
Departamento က de Farmacobiología, Cinvestav, မက္ကဆီကို။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Pharmacobiology, CINVESTAV, မက္ကစီကိုစီးတီး, မက္ကစီကိုဦးစီးဌာန။
လိင်မွတ်မပြေနိုင်သောပြီးတော့ဦးနှောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။
မကြာသေးခင်ကကျနော်တို့မွတ်မပြေနိုင်သောရန်သုတ်ရည်ထိပြီးနောက် 24 ဇ, အ medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) နှင့် ventromedial hypothalamic နျူကလိယ (VMH) တွင်ပေမယ့်မ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာအန်ဒရိုဂျင် receptor သိပ်သည်းဆ (ARD) တွင်တစ်ဦးလျော့ချရေးရှိကွောငျးတငျပွခဲ့သ (BST) ။
အထီးကြွက် immunocytochemistry အားဖြင့် ARD ဆုံးဖြတ်ရန် 48 ဇ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီး 72 ဇသို့မဟုတ်7ရက်ပေါင်း (4 ဇကြော်ငြာ libitum သုတ်ရည်ထိ) ယဇျပူဇျောကြသည် ဟူ. ၎င်း, ထို့အပြင်သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်လွတ်လပ်သောအုပ်စုများအတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် testosterone ဟော်မုန်းအတူတူပင်ကြားကာလမှာယဇ်ပူဇော်ကြ၏။ အခြားစမ်းသပ်မှုများတွင်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ 48 ဇ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီး 72 ဇသို့မဟုတ်7ကာလ၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ T ကသူ 48 ဇလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောအပြီးယောက်ျား၏ 30% တစ်ခုတည်းသုတ်ရည်လွှတ်ပြသနှင့်ကျန်ရှိသော 70% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုပြီးပြည့်စုံတားစီးပြသကြောင်းပြသရလဒ်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၌ဤလျော့ချရေးအတွက် MPOA-medial အပိုင်း (MPOM) တွင်သီးသန့်လျော့ကျတစ်ဦးက ARD ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ခုနစ်ဆယ်နှစ်နာရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောပြီးနောက် MPOM အတွက်အဆင့်ဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန် ARD တစ်ခုတိုးနှင့် LSV, BST, VMH နှင့် MEA အတွက် ARD တစ်ခု overexpression ဖြင့်လိုက်ပါသွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးပြန်လည်နာလန်ထူရှိ၏။ သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် Post-မွတ်မပြေနိုင်သောကာလအတွင်းပြုပြင်မထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် ARD အကြားတူညီနှင့်ကှာဟများ၏အခြေခံပေါ်မှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
comments: ကအခြားလေ့လာမှုများအန်ဒရိုဂျင် receptor များအလိုအရတစ်နေ့လျှင်4အပေါ်တိုးမြှင့်ပေမယ့်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုငြင်းဆန်ခဲ့ကြ 7
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနဂိုအတိုင်းအထီးမျောက်တွေကိုအတွက် diurnal ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းအကွာအဝေးနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်
Biol Reprod ။ 1984 Apr;30(3):652-7.
မိုက်ကယ် RP, Zumpe: D, Bonsall RW.
အန်ဒရိုဂျင်အထီးမျောက်ဝံများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အပြည့်အဝစကားရပ်များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်နဂိုအတိုင်းအထီးအကြားနှိုင်းယှဉ်အတွက်အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြန်ပြောပြဖို့ခက်ခဲသက်သေပြလျက်ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ 4423 အပြုအမူစမ်းသပ်မှုတွေ မျောက်တွေကို၏ 32 အားလုံးတစ်ဦး2နှစ်ကာလအတွင်းတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ် photoperiod အတွက်ကောက်ယူနှင့် 0800, 1600 သို့မဟုတ် 2200 ဇရက်စုဆောင်းနမူနာထဲမှာသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏ကြိမ်နှုန်းအကြားမျှအရေးပါသောဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါသည်ခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူအဆိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုအကြား diurnal အကွာအဝေး၏ပြင်းအား။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းရာသီအလိုက်တိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်အဖြစ်, ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်း၏ diurnal အကွာအဝေးအတွင်းသက်ဆိုင်ရာကျဆင်းခြင်းရှိ၏။ ထို့အပွငျသုက်၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်များနှင့်အတူသူတို့အားယောက်ျားအသေးဆုံး diurnal ပလာစမာ testosterone ဟော်မုန်းပ္ပံပြသခဲ့သည်။ 32 ယောက်ျားနှင့်အတူတစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုမအပြုအမူစမ်းသပ်ခြင်းမဟုတ်သလိုသုတ်ရည်လွှတ်၏ဖြစ်ပျက်မှုတို့သည် diurnal testosterone ဟော်မုန်းအကွာအဝေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကဖော်ပြတယ်။ အကျိုးဆက်, ငါတို့ဆိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ် operated လျှင်အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးဟော်မုန်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ညှနျကွား၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောက်ချက်ချကြပါပြီ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် testosterone ဟော်မုန်း၏တိုးလာ nocturnal အဆင့်ဆင့်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်နှင့် 24 ဇလျှောက်လုံးထိန်းသိမ်းထားတစ်ခုံအဆင့်ကိုတစ်ဦးဝေဖန် endocrine အချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါမအကြံပြုအပ်ပါသည်။
comments: တနည်းကား, testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အနည်းငယ်သာဆက်စပ်မှုရှိ
လိင်ဆက်ဆံမှုတွင်အောက်ပါ The post-orgasm prolactin တိုးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုအောက်ပါထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်နှင့် သာ. ကြီးမြတ်မွတ်မပြေနိုင်သော (2006) အကြံပြု
Biol Psychol ။ 2006 မတ်လ; 71 (3): 312-5 ။ EPub 2005 သြဂုတ် 10 ။
Brody က S, Krüger TH.
စိတ်ပညာ၏ဌာနခွဲ, လူမှုရေးသိပ္ပံကျောင်း, Paisley, စကော့တလန်တက္ကသိုလ်, ဗြိတိန်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
သုတေသနအော်ဂဇင်ကိုအောက်ပါ prolactin တိုး inhibitory အလယ်ပိုင်း dopaminergic နှင့်ဖြစ်ကောင်းရံလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် arousal လျော့ချဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ Post-orgasm prolactin တိုး၏ပြင်းအားအရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေတဲ့ neurohormonal အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာအော်ဂဇင်မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ် penile-အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီးသုံးလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာများအသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့ (non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်အခြေအနေ prolactin အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ချိန်ညှိ) နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းသည်သတင်းပို့, t ကိုသူကလိင်ဆက်ဆံမှုအောက်ပါ prolactin တိုး၏ပြင်းအားကြောင့်အောက်ပါတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက် 400% သာ. ကြီးမြတ်သည်။ ရလဒ်ကပိုဇီဝကမ္မကျေနပ်စရာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းထက်ဖြစ်ခြင်းလိင်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုအရိပ်အယောင်အဖြစ်အနက်နှင့်အခြားမည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူထက် coitus နှင့်ဆက်စပ် သာ. ကြီးမြတ်ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုးခံစားခှငျ့သတင်းပို့ကြိုတင်သုတေသန၏အလင်းထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
မှတ်ချက်များ - ဤသည်မှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအကြားဟော်မုန်းကွဲပြားမှုကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်းတည်း။ ဒါဟာလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းထက် prolactin ၄၀၀% ပိုများစေသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ Prolactin သည်အော်ဂဇင်တွင်မြင့်တက်လာပြီးလိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကျေနပ်မှုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သည် - ၎င်းသည် dopamine ကိုတားဆီးသည်။
testosterone ဇယား: တစ် 3-ရက်သတ္တပတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ abstinence အောက်ပါကျန်းမာယောက်ျားအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-သွေးဆောင်အော်ဂဇင်မှ endocrine တုံ့ပြန်မှု
"အင် testosterone" အတှကျလူအကုသမှု: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2016)